Wantoota filataman gara ragaddeettii jijjiri (wantoota cufamanii sarara qajeelaan marfaman). Haalii argamsa wantotaa hin jijjiramu. Jijjiramichi mul`isuuf mirga cuqaastee Qabxiiwan Gulaalii filachuu dandessa.
Fooyyessi - Jijjiiri - Gara Rogaddeetti filadhu(LibreOffice Fakkaasa qofa)
Halqara baafataa wanta filatamee bani itti aansuun Jijjiiri - Gara Rogaddeetti filadhu
Calaqqeewwan suurxiqqoo gara Saxaatoo vectoritti jijjiru
Gara Ragaddeettii jjjiiri
Dirqaloota armaan gadii fakkii suur xiqqaa gara ragaddeettii jijjiruuf babadamuu. Fakkichii jijjiramee dhugadhaan walittii qabama ragadewwan xixiqqo haluun gutamanii dha.
Dirqaloota jijjirama fakkichaaf qndessi.
Fakkicha jijjiramee keessaa lakkofsa halluwanii mul`achu qaban galchii. Argamsa tokkon tokkoon halluwwan fakkichaa keessaattiif LibreOffice `n ragaddee burqisisa.
Ragaddeewwan hallu gatii pikselii galchiitee irraa xixxiqoo ta`an haqa.
Garaagarumaa haallu fayyadamaa hir`ina qaphxitiin uumamee guuti.
Guutina duubbeef hamamtaa rektanglii saagi.
Durargii fakkicha jalqabaa.
Durargii fakkichaa jijjiramee. Fakkii vektaraayizefamee uumuuf Durargii cuqaasi.
Jijjiramma guddinichaa mul`isa.
Fakkicha jijjiramee osoo geddaruumsa hin fayyadamiin duraargisiisa.
This page is: /text/simpress/01/13050200.xhp
Title is: Gara Ragaddeettii